FSX Weather 2 afọ 7 ọnwa gara aga #854
Maka ihe ụfọdụ, ọnọdụ ihu igwe dị na m FSX ihe ojoo di njo. Ọ bụghị naanị na-ezighi ezi, mana enweghị ebe dị nso, ma ọ bụ nwee ezi maka ụfọdụ ọdụ ụgbọ elu. Ugbu a, imirikiti ọdụ ụgbọ elu dị na Europe na-eche igbu oge n'ihi oke snow.
Maka njo, EHAM Amsterdam..in n'ezie, ihu igwe bụ:
Winds 16 kt si North
Okpomọkụ 1 ° C
Nrụgide 972 hPa
Ígwé ojii na-agba gburugburu na 400 ft
Mgbaghara na 700 ft
(ìhè) ọka snoo
In FSX, ụzọ dị iche. Igwe di ocha, ikuku na okpomoku .... ihe oku a bu? Ọ nwere ụzọ ọ bụla gburugburu ya?
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: luc57
FSX Weather 2 afọ 4 ọnwa gara aga #941
Igwe iji ihu igwe maka ụdị igbe nke FSX akwadoghi JESPEN onye n’eenye gi ihu igwe. M ga-eche na ọ ka nwere maka Steam Edition nyere Dovetail nwere ha na nkwekọrịta. Ọrụ ahụ abụghị n'efu maka Dovetail. Dịka ugbu a FSW enweghị akụrụngwa ihu igwe na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye nrụpụta nke atọ ị nwere ike ịzụta otu site na. Nanị ụzọ iji nweta ezigbo ihu igwe ụwa maka FSX Mpempe igbe, ka ịzụrụ otu dịka Sky Sky 2016
FSX Weather 2 afọ 4 ọnwa gara aga #1013
Achọpụtara m usoro mmemme ihu igwe n'efu - ọ dị obere ma gbasaa ihu igwe FSX - FSXWX.
Kwesighi ịwụnye. Gbaa ndị FSXWX mmemme mgbe ị banyere FSX.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: DRCW
FSX Weather 2 afọ 4 ọnwa gara aga #1014
Enweghị ike ịbịaru saịtị a ..... na nsụgharị, njikọ ọnwu.
FSX Weather 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1063
Hi Dariussssss. Amaghi ihe i bu n'obi. Njikọ yiri ka ọ na-arụ ọrụ ugbu a.
Ma eleghị anya, nke a, (ebe a pụrụ ịchọta ozugbo) .... www.plane-pics.de/fsxwx / ntụziaka-fsx.htm
FSX Weather 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1064
Njikọ ahụ na-arụ ọrụ ma m ga-akwado www.fsrealwx.net/
M na-eji ya na ọ na-enye gị ọnọdụ ihu igwe n'ezie.
Ị nwere ike iji nsụgharị free ma ọ bụ nweta nkwalite na pro.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: goffers
Oge ike page: 0.228 sekọnd